Afro Curly Hair: Mifananidzo yeHirst, Best Products & Trends For 2020?
Afro curly mvere kana kuti afro curly tarisa kuwedzera kukura mukududzirwa! Kubvira pakutanga kwebvudzi rekushanduka kwebvudzi zvakare mu 2007, chinangwa chese sista chemazuva chave chiri chokuwana ipapo bvudzi rakakura uye rakanyanyisa sezvinobvira! Nokudaro nekumbundira kumativi ose mukati maro mukubwinya kwayo! Afro curly mvere ndeyevhudzi dzemazuva ano dzine dome rakanaka kana sphere yemufananidzo inokura uye kunze semafaro e-afro, asi inenge ichitaridzika panzvimbo pechiratidzo chekodha. Vamwe vanoita sokuti vanoita kuti vanyatsofambidzana mukati memoyo mumoyo panzvimbo yea afro, uye izvozvo zvinongonaka.
1 Mifananidzo yeHairstyles & Popular Trends
1.1 NZIRA YOKUTAI KUDZIDZA AFRO LOOK: dombo rinonyanyisa!
2 Nzira Yokuita Sei Nyaya Yangu Yakachena Curly?
4 VANHU VANHU VANHU VANHU VANHU VANHU
4.0.2 Ndinotarisira izvi zvaibatsira. Kusvikira nguva inotevera Sis!
Mifananidzo yeHairstyles & Popular Trends
Afro hair curly nguva dzose yave yakafanana nekutora makore kuti ikure mutambo 4 mvere. Zvisinei, nekufambira mberi kwekupedzisira mu wigs, clip-ins uye kinky vhudzi rinowedzera, kutarisa uku hakuna kumbove kwakasununguka kubvisa. Hausi kungoenda chete kubva kune pfupi kusvika pakuputira pasi pemaminitsi e10, asi hazvina basa kuti mvere dzakaita sei iwe. Iwe unokwanisa kubvisa Afro Curly kutarisa nezvakawedzerwa. Kana iwe uchitova wakasikwa, ndinokurudzira kuisa iyo ins Tora chikamu chekuti chibatanidze zvakanakisisa nemakumbo ako chaiwo ezvakarukwa nokuti unogona nyore kushandisa maitiro ekuputika nechinokanganisa kana Bantu mafundo, ayo ini ndichaatsanangura gare gare. Kana Iwe unenge wakasununguka zvachose sekiromiti seC3a 3b, zvichange zvakaoma kuwana mhepo yakatarisa kutarisa kunze kwekuti vhudzi rako risina nguva. Newe divas, ini ndinorumbidza tsika dzegadziriro sew ins uye kuvhara. Kana kuti yedu shoma yeNubian wig line. Nzira yakanakisisa yepirl yekushandisa ichave iyo Kinky Curly, Coily kana kuti Afro Kinky kuunganidza sezvo idzi dzichapa zvakanakisisa Afro Curly tarisa!
NZIRA YOKUTAI KUDZIDZA AFRO LOOK: dombo rinonyanyisa!
Nzira yakanakisisa yekuita zvakanakisisa kutarisa maonero Afro ndekutevera mazano aya ari nyore. Chinhu chinokosha chaunofungisisa kana uchiumba maonero ako ndeyekuyeuka kuti kushivirira isimba. Kukura bvudzi rako kunotora nguva (majenya uye nguva yakawanda LOL) zvisinei ini ndichakubvumira mune zvakavanzika zvishoma kuti uzvinyengedze kusvikira iwe uzviita! Ngatitangei
Nzira Yokuita Sei Nyaya Yangu Yakachena Curly?
Kana iwe bvudzi rako remukati rakakura uye rakawandisa zvakakwana, chimiro ichi hachibviri kubvisa. Iwe unotova ne 3c kana 4a mavara echisikiro pane kushambidza uye kuenda kunogona kunge yakakwana kuti uwane chimiro ichocho. Zvisinei, kana une 4b 4c bvudzi, saka zvingava zvakaoma ku budirira icho chakanaka afro curly chitarisa. Panzvimbo pezvo, iwe unoda kuita kana kubuda kunze kana Bantu majeko kuti ushandise yako sepirm pattern.
Pane vhidhiyo tutori inoratidza nzira yekuisa afro kinky curly clip on this page kugadzira chidimbu chakareba pasi pasi!
Ichi chimiro chimiro chakatsvakwa pashure pee kusvika mukurumbira wayo munguva ichangopfuura muAfrica mahara.
Kana iwe usina uwandu kana urefu kuti ubvise chimiro chemafro, ipapo iwe unogona kushandisa nguva yekuisa ins. Wana zvikwata zvezvisikwa zvinosanganiswa newe chaiyeiye bvudzi ruvara, izvo zvinonyanya kukosha; Zvimwe, vhudzi rako haringanyanyi zvakanaka. Ndinokurudzira kuwana nguva shoma kuitira kuti vhudzi dzigadzire dome effect. 10 "kana 12" inoshanda zvakanaka uye iwe uchada 1.5-2 seti dzezvikamu. Isa chidimbu ichiisa mukati mevhudzi rako. Iye zvino nguva yaro yekuita uye kugadzira vhudzi. Kuti uone kutarisa iwe unoda kushandura bvudzi kana kuti kugadzira Bantu mavara kune fomu bouncy curls. Kurumidza kuoma nokukurumidza, uye nyore nyore kushandisa zvidhi zveusiku, kushandura bvudzi uye kusanzwisisa mangwanani iwayo. Kunyange zvakadaro, maBantu mavara anoita zvakanakisisa pakuonekwa kwemukati. Kuparara pamusoro pekuita bhizinesi reBantu kunze kwokuti zvinotora nguva dzose kuti zviome kuitira kuti iwe ugone kugara pasi pechimedu chemafuri. Chinhu chinokosha chokufunga nezvazvo apo uchiedza kuonekwa zvakanaka kutarisa kuvhara miti. Izvi zvinoita kuti urege kuderedza kuvhara uye unobvumira bvudzi rako reAfro kuti rive rinogona kunyatsogadzikana pakugadzira.
VANHU VANHU VANHU VANHU VANHU VANHU
Nzira iri nyore uye yakanyanyogadziriswa yekuita kuti afro curly ione ndeyokushandisa wigs! Iwe unogona kuwana chero chimiro, mararamiro, maitiro, uye purogiramu yemafuta iwe waunoda nechinguva chiduku kuburikidza chete kuisa afkked krokly curly wig like this!
Ndinokurudzira kuedza muKfupi Nubian Coily Wig Unogona kugadzira nekujekesa zvipfeko nenzira imwechete iwe waizoita zvakananga sekushandisa afro kinky hair. Iwe unogona kushambidza uye unoenda pamwe nekugadzirwa kwemavara sekufambisa kunze uye Bantu knota kunze kana kuisa afro crochet hair.
Iwe unotofanira kushingairira kudzidzisa bvudzi rako kuti riite kuti riwedzere kudarika panguva dzose dzepasi. Zvisinei, iri zhizha, zvinova pachena kuti nzira yakadzivirirwa yekudzivirira inogona kuva ndiyo nzira yakanakisisa. Kunyangwe izvi zvingava zvakadaro, isu tose tinoda kuratidza kinky yedu tress! Ndiani anoda kudzivirira maitiro nguva yose ??? Kana iwe uchizobvongodza bvudzi rako reAfro Curly kana iwe wakanyarara kwechando ichi, iva nechokwadi chokuti uri kuchengeta zvaunogumisa zvinopera mhepo.
Kushandisa sarudzo yepamusoro kunogona kufamba nenzira yakareba. Ngatitarisei, kusarudza bvudzi rako rinogona kuva dhu, kunyanya kana rakaoma kana iwe usati wambojaira. Zvisinei, nehuwandu hwakaenzana hwekusagadzikana, iwe pachako unotanga kuve wakanyatsogadzikana pakuve wakanyatsogadzikana kutaridzirwa kunyange painoenda. Zvisinei, isu tinokurudzira kushandisa svondo-mune chimiro chinonyatsokodzera chimiro chako chepikisi uye kungosarudza kubva pamudzi. Nyora zvinyoro kubva pamudzi uye usimudze. Izvi zvichaita kuti vhudzi riwedzere uye vobatsire vhudzi rako kusimuka kuti uite kuti afro curly uone! Kana bvudzi rako rakatetepa iwe uchawana zvakanakisisa afro zvishoma nekunyora bvudzi rako pakarepo kubva pamidzi kusvika pakati pebvudzi rako bvudzi mushure mokunge tabuda kunze kana Bantu knota kunze!
Ndinotarisira izvi zvaibatsira. Kusvikira nguva inotevera Sis!
Best ndebvu Zvekuchengetedza Miti Yevanhu VemaMarudzi
Nzira Yei Kuita Curlformers uye Waveformers
Kufunga nezvekuenda blonde? Heano mamwe mazano!